Nkpọrọ ụkwụ na ntan; Ihe ụfọdụ na-emetụta ihe gbasara ọrụ nchịkọta n'ime nchịkọta Google
Ọrụ ime ụlọ bụ nkọwa nọmba 1 n'azụ ihe ọmụma dị na nchịkọta Google. Ekwesighi ka ekwu ihe banyere spam? N'ịbụ ndị na-ewe iwe, spam nwere ike ịkọ ọdịiche dị oke mma, ebe ọrụ ime ụlọ na-esiri ike ịmata ezigbo nleta.
Andrew Dyhan, Onye Nlekọta Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Ọkachamara , kọwakwuru ebe a na ndụmọdụ bara uru iji nyere gị aka ijikwa ọrụ n'ime ụlọ - meilleurs logiciels pour.
Gini bu oru di n'ime?
Ọrụ ime ụlọ na-eweta ozi nke gị ma ọ bụ onye ọ bụla si na otu ndị na-emechi ndị mmadụ ma ọ bụ saịtị nhazi. A na-edebanye mmeri ndị a na Google Analytics dị ka à ga-asị na ha sitere na ezigbo onye ọbịa.
Nke a nwere ike ibute nsogbu dị ukwuu, karịsịa n'ihi na mgbe e mesịrị, ọ na-esiri ike ikewapụ nleta ndị ahụ bụ nke ọma na nke sitere na ndị mmadụ na-ebelata na saịtị ahụ.
Gịnị Bụ Adreesị IP?
Adreesị IP bụ nọmba pụrụ iche nke na-akọwa ọdịiche dị iche iche sistemụ, PC na ngwaọrụ dị iche iche..IP nwere ụdị abụọ: nke ọha na eze na-eme ka ọdịiche dị n'etiti gị na weebụ na nkeonwe. Onu ogugu na netiti netiwu gi (ISP), onye nwere ike inwe Static IP na di omimi IP. N'okpuru ị ga-achọpụta ụkpụrụ nduzi na-emebi ihe IP.
Na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ihe dị n'ime GA
A chọrọ gị ịmepụta usoro anaghị arụ ọrụ: ọ bụrụ na ị na - enye adreesị IP metụtara usoro, a na - akpọnyekwa ngwaọrụ ọ bụla ejikọtara na ya.
Mgbe ị na-eji ekwentị iji nwalee interface weebụ gị na Wi-Fi: mgbe ị na-eji ozi weebụ gị dị mkpirikpi, onye na-azụ gị na-ahọpụta gị IP ọzọ n'oge ọ bụla. A na-ahọrọ Wi-Fi karịsịa ma ọ bụrụ na ị nyochaa saịtị ọ bụla site na iji ekwentị gị ebe ọ nwere ike ịmepụta ọrụ gị iji usoro ndị dị n'okpuru.
Otu esi eme ka ọwa ọwa maka ịrụ ọrụ n'ime ụlọ
Ị nwere ike ịjụ otu IP ma ọ bụ ụdị IP dị na usoro yiri ya. A na-eme nke a site na mpempe akwụkwọ ahụ mgbe ọ bụla IP yiri nke a.
Olee otú ị ga-esi zere otu ihe IP na Google Analytics
N'elu ohere na ị nọ na nzukọ na-agafe agafe, ọ ga-ekwe omume na ị na-enwe ọtụtụ akụkụ IP. Iji zere ịbanye na IP ọ bụla, ị nwere ike ịmepụta ọwa ọzọ na regex mmepe.
Detuo nkwupụta ahụ e mere na Igbe Nlereanya Ọwa
Iji nwalee ọwa ahụ, chọọ ebe ndị a machibidoro na saịtị ma dokwuo anya na ọrụ a, ọ pụtaghị na akụkọ na - aga n'ihu, na - agbakwụnye otu agwa na nkwupụta.